တရားမဝင် လက်ဝယ်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံခြားဖြစ်အရက်အမျိုးမျိုး ကိုအခွန်ဆောင်ဖို. မနက်ဖန်နောက်ဆုံး ကြေငြာလွှာတင်သွင်းရမယ် - Yangon Nation News
တရားမဝင် လက်ဝယ်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံခြားဖြစ်အရက်အမျိုးမျိုး ကိုအခွန်ဆောင်ဖို. မနက်ဖန်နောက်ဆုံး ကြေငြာလွှာတင်သွင်းရမယ်
ပြည်တွင်း၌ရောက်ရှိနေသော နိုင်ငံခြားအရက်အမျိုးမျိုးတရားမဝင်တင်သွင်းရောင်းချခြင်းတို့အပေါ် မြို့နယ်အတွင်းရှိလုပ်ငန်းရှင်များမှ ကြေငြာလွှာတင်သွင်းခြင်း၊အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းတို့ကိုသိရှိ လိုကိနာ ဆောင်ရွက်စေရေးအတွက်အသိပေးဆွေးနွေးတာတွေ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ပြည်တွင်းသို့ နိုင်ငံခြားဖြစ်အရက်အမျိုးမျိုး တရားဝင်တင်သွင်းခွင့်ကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ယခုနှစ် မေလအတွင်း ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးနောက် တရားဝင်တင်သွင်းမည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ဈေးကွက်အတွင်း နိုင်ငံခြားဖြစ်အရက်များ တရားမဝင်တင်သွင်းရောင်းချနေသောလုပ်ငန်းများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရောင်းချရာတွင် နစ်နာမှုမရှိစေရန်ဖြစ်တယ်လို. သိရပါတယ်။
တရားမဝင်ရောက်ရှိနေသောနိုင်ငံခြားဖြစ်အရက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုကျသင့်အခွန်အကောက်များပေးဆောင်စေခြင်း၊A1အမှတ်အသား(ခြင်္သေ့)အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ရန်အသိပေးကြေငြာချက်၊လက်ကမ်းစာစောင်များကပ်နှိပ်သည့်အခွန်အမှတ်တံဆိပ်နမူမူနာပုံစံများ၊အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ပေးရန် ကြေငြာလွှာပုံစံများကိုအခွန်ထမ်းပြည်သူများထံဖြန့်ဝေပေးခြင်းအဆိုပါလုပ်ငန်းစီမံချက်အားOne Stop Service(Oss)စနစ်ဖြင့် စက်တင်ဘာလ ၁ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့ထိ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
စီမံချက်ကာလအတွင်း ထပ်မံ ရောက်ရှိ လာနိုင်သည့် တရားမဝင်အရက်အမျိုးမျိုးကို ကာကွယ်တားဆီးရန်ကြေညာလွှာ တင်သွင်းရက်ကို ဩဂုတ်လ(၂၈)ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထား၍ တင်သွင်း ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဩဂုတ်လ(၂၈) ရက်နောက်ပိုင်း တင်သွင်းလာသည့် ကြေညာလွှာများကို လက်ခံ ဆောင်ရွက် ပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို.ဆိုပါတယ်။
စီမံချက်ကာလအတွင်း တရားမဝင်အရက်များ ရောင်းချနေ ကြောင်းတွေ့ရှိ ပါက တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာ (၁)ရက် နေ့မှစ၍တရားမဝင် အခွန် အမှတ် တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ထားခြင်းမရှိသော နိုင်ငံခြားအရက် အမျိုးမျိုးကို လက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် လက်လီလက်ကား ရောင်းချခြင်းများအပေါ် အထူးကုန်စည်ခွန် ဉပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက် သွားမယ်လို.သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် ရထားတွဲဆိုင်းသစ်များစတင်ပို့ဆောင်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်အား မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် အမေရိကန်ကုန်သည်များအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ လာရောက်တွေ့ဆုံ